Forum: Romantic | Horn Marriage
Home Forums Romantic Username
Recently Published ArticlesDooro Qofkaaga! – W/Q: Nada Yuusuf Cumar12:19 am 14 Nov 2015Maxaa laga yidhi Astaamaha Xidhiidhka ka dhexeeya Jacaylka iyo metalayaashiisa?12:46 am 21 Oct 2015Haweenka iyo Ilaalinta Sirta12:40 am 21 Oct 2015Kalsoonida Lammaanaha iyo ku-qanacsanaanta Heer-nololeedka ay wadaagaan12:37 am 21 Oct 2015Qodobbo kuu sahlaya inaad Xoojiso Xidhiidhka lammaanahaaga12:29 am 21 Oct 2015	Romantic
This forum contains 2 topics, and was last updated by Isse abdullah 1 year, 5 months ago.
Started by: Siciid
in: Choosing the right partner
Started by: Isse abdullah
Started by: mohamed hassan
Magacaygu waa Amira Abukar Osman. Waxaan ahay 20 jir, waxaan degenahay dalka Norway caasimadda Oslo. Waxaan ku wareeray kala xulashada geyaankayga. Ugu danbayn waxa I caawiyay website ka Hornmarriage.com. Waxaan ka helay lammaane ii qalma kaas oo tuurta u ritay masuuliyaddii noloshayda. Dhawaan Ayaan is mehersanay Ayaanle Aadan Axmed oo deggan magaalada Hargeysa. Waxaan u isku aroosaynaa Hargeysa xagaaga 2016. Waxaan u mahad naqayaa bahda Hornmarriage oo adeegan suura gelisay. Dad ka faa’idaysay Xidhiidhka HORNMARRIAGE